Xildhibaan Xuseen Carab ciise oo ka hadlay sharciyo horyaalla baarlamaanka – Kalfadhi
Guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in ay weli baarlamaanka horyaalan sharciyo badan oo la doonayo in golaha shacabku ka dooddo si loo meel mariyo.
Xildhibaanka oo wareysi gaar ah siiyay idaacada VOA ayaa sheegay in sharciyada ganacsiga,la dagaalanka argagixisada iyo sharciga xaqsiinta ciidamada iyo shuruuc kaleba in ay horyaalan golaha shacabka.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa fasax galay ka hor maalmaha munaasabada ciidul Fidriga.
Kaldhigan seddexaad ee golaha shacabka ayaa furmay bishii Maarso ee sanadkan ka hor inta uusan dhalan khilaafkii xilka looga qaaday afhayeenkii hore ee golaha mudane Maxamed sheekh Cusmaan Jawaari.
Afhayeenka golaha shacabka mudane Maxamed Mursal sheekh Cabdiraxmaan ayaa weli ku maqan dalka Jabuuti welina ma cadda waqtiga rasmiga ah ee ay dib u billaaban doonan howlaha baarlamaanka.